Bible Mu Nsɛm Ɛpo Kɔkɔɔ no Twa - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ nea ɛrekɔ so! Mose na okura poma a wateɛ ne nsa wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no so no. Wɔn a wogyina asase kesee so wɔ ne nkyɛn ne Israelfo no. Nanso Farao ne ne dɔm no na wɔrewu wɔ ɛpo no mu no. Ma yɛnhwɛ sɛnea ɛbae.
Sɛnea yehui no, Farao ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ womfi Misraim bere a Onyankopɔn de ɔhaw a ɛto so 10 no baa Misrifo so no. Israelfo mmarima bɛyɛ 600,000 fii hɔ, a mmea ne mmofra pii ka ho. Na, nnipa afoforo pii a na wɔabenya Yehowa mu gyidi ne Israelfo no kɔe. Wɔde wɔn nguan ne wɔn mpapo ne wɔn anantwi nyinaa kaa ho kɔe.
Ansa na wɔrefi hɔ no, Israelfo no srɛɛ Misrifo no hɔ ntade ne nneɛma a wɔde sika ne dwetɛ ayɛ. Ná Misrifo no suro, esiane ɔhaw a etwa to a ɛbaa wɔn so no nti. Enti wɔde biribiara a Israelfo bisae no maa wɔn.
Nna kakra bi akyi no Israelfo no beduu Ɛpo Kɔkɔɔ no ho. Wɔhomee wɔ hɔ. Bere tiaa no mu no Farao ne ne nkurɔfo fii ase dii awerɛhow sɛ wɔama Israelfo no kɔ. Wɔkae sɛ: ‘Yɛama yɛn nkoa no kɔ!’
Enti Farao san sakraa n’adwene. Ntɛm ara na ɔboaboaa nteaseɛnam ne ne dɔm ano. Na ofii ase sɛ ɔde nteaseɛnam atitiriw 600 ne Misrifo nteaseɛnam afoforo nyinaa betiw Israelfo no.
Bere a Israelfo hui sɛ Farao ne ne dɔm di wɔn akyi reba no, ehu kaa wɔn kɛse. Na baabiara nni hɔ a wobeguan akɔ. Na Ɛpo Kɔkɔɔ no wɔ wɔn anim, na na Misrifo no nso fi wɔn akyi. Nanso Yehowa maa omununkum bi baa ne nkurɔfo ne Misrifo no ntam. Enti na Misrifo no nhu Israelfo no na wɔatow ahyɛ wɔn so.
Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ ɔnteɛ ne poma no wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no so. Bere a ɔyɛe no, Yehowa maa apuei mframa kɛse bi bɔe. Ɛpo nsu no mu paee, na ɔkwan bɛdaa ntam.
Na Israelfo no fii ase nantew asase kesee so wɔ ɛpo no mu. Egyee nnɔnhwerew pii na nnipa ɔpepem pii no ne wɔn mmoa atwa ɛpo no. Akyiri yi Misrifo no tumi huu Israelfo no bio. Na wɔn nkoa no rekɔ! Enti wofii ase sɛ wɔretiw wɔn wɔ ɛpo no mu.
Bere a wɔyɛɛ saa no, Onyankopɔn maa wɔn nteaseɛnam no anan tutui. Ehu kaa Misrifo no kɛse na wofii ase teɛteɛɛm sɛ: ‘Yehowa ne yɛn reko ama Israelfo. Momma yenguan mfi ha!’ Nanso na aka akyi dodo.
Ɛha na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ ɔnteɛ ne poma no wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no so, sɛnea wuhu wɔ mfonini no mu no. Na Mose yɛɛ saa no, nsu no fii ase san bae, na ɛbɛkataa Misrifo ne wɔn nteaseɛnam no so. Ná asraafo dɔm no nyinaa adi Israelfo no akyi kɔ ɛpo no mu. Na Misrifo no biako mpo anka!
Anigye bɛn ara na Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa nyae sɛ wonyaa nkwa! Mmarima no too dwom yii Yehowa ayɛ sɛ: ‘Yehowa adi nkonim kɛse. Watow apɔnkɔ ne ɛsotefo agu po no mu.’ Mose nuabea Miriam faa ne mpintin, na mmea no nyinaa de wɔn mpintin dii n’akyi. Na bere a wɔde ahosɛpɛw sawee no, wɔtoo dwom koro no ara a na mmarima no reto no bi: ‘Yehowa adi nkonim kɛse. Watow apɔnkɔ ne ɛsotefo agu po no mu.’
Exodus ti 12 kosi 15.
Israelfo mmarima, mmea ne mmofra baahe na wofii Misraim, na henanom na wɔne wɔn kɔe?
Farao tee nka dɛn bere a ɔmaa Israelfo no kɔe no akyi, na dɛn na ɔyɛe?
Dɛn na Yehowa yɛe a enti Misrifo no antumi antow anhyɛ ne nkurɔfo no so?
Bere a Mose de ne poma no kyerɛɛ Ɛpo Kɔkɔɔ no so no, dɛn na esii, na Israelfo no yɛɛ dɛn?
Dɛn na esii wɔ bere a Misrifo no de mmirika tiw Israelfo no wɔ po no mu no?
Dɛn na Israelfo no yɛe de kyerɛe sɛ wɔn ani agye na wɔn ani asɔ sɛ Yehowa agye wɔn?
Kenkan Exodus 12:33-36.
Ɔkwan bɛn so na Yehowa maa ne nkurɔfo nyaa mfe pii a wɔde yɛɛ nkoa wɔ Misraim no so akatua pa? (Ex. 3:21, 22; 12:35, 36)
Kenkan Exodus 14:1-31.
Mose nsɛm a wɔakyerɛw wɔ Exodus 14:13, 14 no ka Yehowa asomfo a wɔwɔ hɔ no dɛn bere a Harmagedon ko reba no? (2 Be. 20:17; Dw. 91:8)
Kenkan Exodus 15:1-8, 20, 21.
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ Yehowa asomfo to ayeyi dwom ma no? (Ex. 15:1, 2; Dw. 105:2, 3; Adi. 15:3, 4)
Ɔkwan bɛn so na Miriam ne mmea a na wɔwɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho too dwom yii Yehowa ayɛ de yɛɛ nhwɛso maa Kristofo mmea a wɔwɔ hɔ nnɛ? (Ex. 15:20, 21; Dw. 68:11)